Shamarree Ityoophiyaa umurii 19 dandeettii kalaqaan dinqisiifannaa olaanaa argatte – Fana Broadcasting Corporate
Shamarree Ityoophiyaa umurii 19 dandeettii kalaqaan dinqisiifannaa olaanaa argatte
Finfinnee, Onkololeessa 2,2011(FBC)-Shamarree Ityoophiyaa umurii 19 Beetleheem Dassee laabraatoorii Sheebaa vaalii jedhamu keessatti hojii hojjetteen dinqisiifannaa isheef qabu CNN gabaase.
Kalaqni teeknooloojii biyya keenyaa guddina irra jiruun,Beetleheem laabraatorii Ayikoog jedhamu waliin ta’uun Roobootii Soofiyaa jedhamtu hojjechuu irratti hirmaattee jirti.
Gama biraanis appilikeeshinii soofti weerii 4 hojjechuun mirkaneeffannaa abbummaa kan argatte yoo ta’u, appilikeeshinii ishee keessayis tokko mootummaan kan itti fayyadamu laggeen misooma jallisiif oolan kaartaa irratti agarsiisu kalaqxee jirti.
Beetleheem magaala Haraaritti kan dhalatee yoo ta’u, umurii 9 taatee suuqii eleektirooniksii abbaa ishee keessatti viidiyoo idiit gochuun maamiltootaf muuziqaa moobayilii irratti erguun galii argachuu eegalte.
Bara 2006 hojii kan eegale Ayikoog Artifishaal Intelejensi Porogiraamiing hojii biyya keessatti hojjetu hoggansa Muummee ministira Dooktar Abiyyiin guddachaa dhufee jira jedha gabaasni CNN.
Ergaawwaan sagalee sobaa adda baasuuf yaaliin Hantuutarratti hojjetame firii gaari…
Jiraataan Merry Land tokko waan abjuu isaatiin ajajame raawwachuun doolaara Ameerikaa…
Wanti SIM kaardii bakka bu’a jedhame ESIM’n maalidha…?
Qabxiin skoolaastiik aptiitiyuudii sirrate kaleessaa eegalee…
MM Dr Abiy Ahimad hoggansa mormitootaa Sudaan waliin…
Rakkoon nageenyaa Hawaasaa fi godina Sidaamaa aanaalee…